धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि आर्शीवाद थाप्न नेताको घरदैलो दौडहा - Aarthiknews
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि आर्शीवाद थाप्न नेताको घरदैलो दौडहा
सोमबार, १३ असोज २०७६
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्कीको कार्यकाल कात्तिक १ गतेबाट रिक्त हुने भएपछि उक्त पदका लागि नेताको आर्शीवाद थाप्ने दौडहा शुरु भएको छ । नेताको जसले बढी आर्शीवाद पाउँछ त्यही व्यक्ति धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुने पक्का छ ।
बोर्डको नयाँ अध्यक्षका लागि परिष्टनाथ पौडेल, निरज गिरी, डा.नवराज अधिकारी, भीष्म ढुंगानालगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी भिडदै छन् । । अध्यक्षका लागि दौडाहामा रहेका पौडेल र गिरी बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत छन् । दुवै कार्यकारी निर्देशकले लामो समय बोर्डमै कार्य गरेको अनुभव भएकाले अध्यक्षको दाबी गरेका हुन् ।
त्यस्तै बोर्डकै निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले पनि आफू अध्यक्षका लागि उपयुक्त व्यक्ति भएको दाबी गर्दै आएका छन् । कार्य क्षमताका हिसाबले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका अधिकारी बोर्ड हाँक्न सक्ने क्षमता राहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसैगरी बोर्डका विज्ञ सदस्य भीष्मराज ढुङ्गाना पनि अध्यक्ष बन्ने लाइनमा छन् । उनलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने गरी विज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरिएको भन्ने पनि एकाथरीको भनाइ छ । उनलाई अध्यक्ष बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिफारिस समेत रहेको चर्चा रहेको छ ।
ढुङ्गाना राष्ट्रपति भण्डारी निकट मानिन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीकै सिफारिसमा उनी केही महिना अघि बोर्डको विज्ञ सदस्य नियुक्त भएका हुन् । तर, सत्तपक्ष नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष भने भीष्मराज ढुङ्गानालाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन नहुने लबिड शुरु गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो गुटको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छन् ।
केपी ओली निकट मानिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र बोर्डको आगामी अध्यक्ष बनाउने गरी ढुङ्गानालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
बोर्डको विज्ञ सदस्य गत चैतदेखि खाली थियो । निलबहदुर सारु मगरले अवकाश भएको ६ महिनापछि राष्ट्र बैंकका पूर्व ार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना नियुक्ति गरिएको थियो ।
यसअघि ढुङ्गाना राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पदेन सदस्यका रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सञ्चालक समिति सदस्य पनि थिए । त्यसैले पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई ढुङ्गानालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्न सहज भएको थियो ।
ढुङ्गानाले लामो समय राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागको प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनी केही समय अघि राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएका थिए ।
बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने चलखेल शुरु भएको छ । सत्तापक्ष दलभित्र आ आफ्नो गुट नजिकका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेहरुबीच तिब्र लविङ शुरु भएको छ ।
बोर्डका अहिलेका अध्यक्ष डा. कार्कीको कार्यकाल सकिन करिब १५ दिन मात्र बाँकी छ । छोटो समय भएकाले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा छलफल तिब्र हुन थालेको छ । बोर्डको अध्यक्ष बन्ने लिगलिगे दौडमा करिव आधा दर्जन देखिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस दौर्डमा कसको पल्लाभारी हुने त्यो भने अहिले नै भन्न नसकिने बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । दशैंमा ठूला बडाको आर्शीबाद थापेजस्तै पछिल्लो समय बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि नेताको आर्शीवाद थाप्न दौडनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढनै गएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष कार्कीको १५ दिन बढी बिदा बाँकी रहेकाले बिदा बस्ने तयारीमा छन् । बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए । उनले आफूले धेरै सुधारका काम गरिसकेकाले नयाँ अध्यक्षका सहज हुने पनि बताएका थिए । अध्यक्ष कार्कीले चालू आर्थिक वर्षको बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यक्ष कार्कीले वित्तीय सुधारमा भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।
यस्तो छ कर्णालीका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा
आज फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलामा कति पुग्यो ?
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, यस्तो छ आजको विनिमयदर
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई घर पठाउने निर्णयबाट ट्रम्प पछि हटे
कास्कीमा दुर्लभ ‘किङ कोब्रा’ भेटिएपछि संरक्षण शुरु
आजदेखि पुनः उद्धार उडान हुने
घुस लेनदेन बढ्यो, एकै दिन चार कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा
कस्तो छ तीन दिनको मौसम ?
कतै योजनाको खातैखात, कतै अभाव
काठमाडौंमा थप २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सवारी अनुमति पत्र वितरण बन्द
रियल स्टेट र हायर पर्चेजको लागि कस्तो हुँदैछ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या कति पुग्यो ?
कोरोनाको जोखिम टरिसकेको छैन, सार्वजनिक यातायातमा सकेसम्म यात्रा नगर्नूः स्वास्थ्य मन्त्रालय
साढे तीन करोड ऋण पास गरिदिने भन्दै ठगी गर्ने दुई पक्राउ
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा दुई जना बेपत्ता